Adikao ary apetaho fa tsy mandeha amin'ny Mac? Ampianarinay ianao hamaha azy | Avy amin'ny mac aho
Adikao ary apetaho fa tsy mandeha amin'ny Mac? Mampianatra anao hamaha izany izahay
Ny rafitra fiasan'ny Mac no iray amin'ireo milamina indrindra. Na izany aza, tsy misy rafitra tsy misy adala. Ary koa, raha manavao tsy tapaka ny kinova farany ianao, dia mety ho ahitsy ho azy ireo tsy fahombiazan'ny rafitra ireo rehefa apetrakao indray ilay ampahany misy lesoka.
Ny iray amin'ireo tsy fahombiazana somary tsotra, saingy manelingelina antsika, dia hidin-trano amin'ny fikajiana sy fandefasanaNoho izany, fampiharana izay mpampiasa, ampiasao isan'andro io fiasa io. Raha tsy nahomby taminao tamin'ny fotoana rehetra, dia hasehonay anao ny fomba hamahana azy haingana ary amin'ny fomba roa samy hafa, mba hahafahanao misafidy ilay mora indrindra ho anao.
Ny tokony hataontsika dia alefaso indray ity fampiasa ity, izany hoe terena hanidy sy hanokatra indray. Ity hetsika ity dia mamaha saika ny olana amin'ny clipboard rehetra mijanona na olana hafa.
1 Safidy 1: Miaraka amin'ny Monitor an'ny Asa.
2 Safidy faharoa: Amin'ny alàlan'ny Terminal.
Safidy 1: Miaraka amin'ny Monitor an'ny Asa.
Amin'ity tranga ity, handeha ho any amin'ny monitor aktivitas izahay, izay hita ao anaty fampirimana fampiharana:
Avy amin'ny Finder, amin'ireto lalana manaraka ireto: Applications / Utilities, na,
avy amin'ny Spotlight, fidirana amin'ny: Command + Spacebar ary fanaraha-maso ny Asa atao.
Rehefa misokatra isika, ao amin'ny boaty fikarohana eo amin'ny ankavanana ambony, dia tsy maintsy manoratra isika: hazo fisaka
Safidio ny safidin'ny takelaka ary kitiho ny X, izay eo amin'ny ankavia ambony.
Hisy safidy hiseho, hampitandrina antsika raha te hampijanona ny fizotrany isika. Tsindrio eo "Fivoahana an-kery"
Afaka isika izao akatony ny monitor ny hetsika.
Mihidy ho azy ny asany ary misokatra indray. Mitovy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra izany, fa an'io fiasa io irery. Andramo izao raha mandeha tsara ny fiasa "copie and paste".
Safidy faharoa: Amin'ny alàlan'ny Terminal.
Amin'ity indray mitoraka ity, haverinay ny dingana voalohany amin'ny safidy teo aloha, fa amin'ity indray mitoraka ity, mijery ao amin'ny fampirimana fisoratana anarana na amin'ny Spotlight izahay ho an'ny fampiharana: Terminus.
Rehefa misokatra dia manoratra izahay: killall pboard.
Afaka isika izao fivoahana Terminal.
Ny iray amin'ireo safidy roa ireo dia tokony hanamboatra ny olana. Raha tsy izany dia avereno indray.
Ity fizarana ity dia tsy an'ny macOS High Sierra ihanyNoho izany, azonao atao ny mampihatra azy na dia manana macOS teo aloha aza ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Adikao ary apetaho fa tsy mandeha amin'ny Mac? Mampianatra anao hamaha izany izahay
Hatramin'ny fanavaozana ny fahitana farany dia nijanona tsy niasa ho ahy intsony ny kopia / apetaka. Efa nanandrana ireo fomba roa lazainao aho .. saingy tsy mety amiko izany. Tsy haiko raha fantatrao ny momba ny olan'ny antony miaraka amin'ity fanavaozana farany ity dia nijanona tsy niasa intsony. Raha misy fomba hafa, dia tiako izany.
Na ny safidy roa dia tsy mety amiko
Ny maka tahaka - tsy mety amiko ny pasteur ... Efa nanandrana izay nosoratako aho ary tsy nisy mihitsy, mampiasa ireo baiko ireo aho amin'ny asa andavan'andro ary manome olana be dia be ho ahy ...
Belén Furtado dia hoy izy:
Salama, ny baiko mandika sy mametaka avy amin'ny fanavaozana farany dia tsy mety amiko ihany koa. Nahita vahaolana momba izany ve ianao?
Valiny tamin'i Belén Furtado
Liset dia hoy izy:
Salama, tsy nomeny ahy ireo dingana ireo, nanandrana imbetsaka aho ary tsy nisy ... FANAMPIANA tontolo andro dia tsy te-hikapoka ahy izy na zavatra hafa 🙁
Mamaly an'i Liset
Juan Carlos Villalobos placeholder sary dia hoy izy:
Any! Tsy mandeha izy io.
Valiny tamin'i Juan Carlos Villalobos
Liz dia hoy izy:
Genius tanteraka! Notereko hivoaka ary niasa avy hatrany! misaotra feno
Valio i Liz
The Pillars of the Earth, lalao iray hafa tonga ho an'ireo mpampiasa Mac
Ahoana ny fampiasana kitendry Windows amin'ny Mac